Bit By Bit - Ny ho avy - 7.2.1 Ny famenoana ny mofomamy sy ny fiompiana
Tsy misy paikady madio na maotina, na taratra madio ho an'ny fiompiana madio, amin'ny fampiasana manontolo ny fahaiza-manaon'ny dizitaly. Amin'ny hoavy dia hamorona hybrides isika.
Tamin'ny fampidiran-dresaka, nanohitra ny endriky ny maodelin'ny Marcel Duchamp aho miaraka amin'ny fomba amam-panaon'ny Michelangelo. Io fahasamihafana io ihany koa dia manavaka ny fahasamihafana misy eo amin'ny mpahay siansa, izay miara-miasa amin'ny mofomamy, sy ireo mpahay siansa sosialy, izay miara-miasa amin'ny custommades. Amin'ny hoavy, na izany aza, dia manantena aho fa hahita marika maromaro kokoa isika satria voafetra ny fomba fiasan'izy ireo. Ireo mpikaroka izay te hampiasa maitso maitso ihany no handeha hiady satria tsy misy mahazatra ny kiraro tsara tarehy eto amin'izao tontolo izao. Ireo mpikaroka izay te-hampiasa solika fotsiny, etsy andaniny, dia hanao sorona lehibe. Ny fomba fiasa Hybrid, na izany aza, dia afaka mampifandray ny lanjany izay miaraka amin'ny mofomamy miaraka amin'ny fifandraisana mivaingana eo amin'ny fanontaniana sy ny angona avy amin'ny custommades.
Nahita ohatra mikasika ireo hybrida ireo izahay ao amin'ny toko tsirairay tsirairay. Ao amin'ny toko faha-2 dia hitantsika ny fomba fiasan'ny Google Flu izay mampifandray ny rafi-pandam-pahalalana lehibe (fangatahana fikarohana) miaraka amin'ny rafi-pandaminana mahazatra nentim-paharazana (rafitra fanaraha-maso ny gripa CDC) mba hamokarana haingana kokoa (Ginsberg et al. 2009) . Ao amin'ny toko faha-3 dia hitanay ny fomba nampitan'i Stephen Ansolabehere sy Eitan Hersh (2012) ny angon-drakitra nofinofy miaraka amin'ny antontan-taratasim-pitantanan-draharaha efa napetraky ny governemanta mba hahalalàna bebe kokoa ny toetran'ireo olona izay mifidy marina. Ao amin'ny toko faha-4 dia hitantsika ny fomba fanatrehan'ireo mpanara-dia an'i Opower ny fampiroboroboana ny famerenana herinaratra amin'ny alàlan'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny custommade mba handinihana ny fiantraikan'ny fitsipi-pifehezana momba ny fitondran-tenan'ny olona an-tapitrisa (Allcott 2015) . Farany, ao amin'ny toko faha-5, dia hitantsika ny fomba nampiasan'i Kenneth Benoit sy ireo mpiara-miasa (2016) fametrahana fandaharam-potoana ho an'ny famolavolana olona maromaro ho amin'ny famolavolana maromaro noforonin'ny antoko politika mba hamoronana angon-drakitra izay azon'ny mpikaroka ampiasaina handinihana ny dinidinika momba ny adihevitra politika.
Ireo ohatra efatra ireo dia mampiseho fa ny paikady matanjaka amin'ny ho avy dia hampitombo ireo loharanom-baovao lehibe, izay tsy noforonina mba hanaovana fikarohana, miaraka amin'ny fampahalalana fanampiny izay mahatonga azy ireo ho mety kokoa ho an'ny fikarohana (Groves 2011) . Na manomboka amin'ny custommade na ny readymade, ity fomba fiasa hybrid ity dia manana fampanantenana lehibe ho an'ny olana maro momba ny fikarohana.